မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်ခြံမြေဈေးတည်ငြိမ်စေဖို့…. – Entrepreneurs in Myanmar
ရန်ကုန်၊ ၂၂ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၅: မြန်မာနိုင်ငံ၏ အိမ်ခြံမြေဈေးနှူန်းများမှာ အခြားသော အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် နှိူင်းယှဉ်မည်ဆိုလျှင် မြင့်မားလွန်းသည့်အခြေအနေတွင်တည်ရှိနေပါသည်။ ပြည်တွင်းအိမ်ခြံမြေဈေးကွက်အား ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးစေရန်နှင့် နိုင်ငံတကာမှ အိမ်၊ခြံ၊မြေ၀ယ်လိုအားများ နှင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံလိုသူများ၏ စိတ်ဝင်စားမှူများရရှိလိုပါကလဲ မြန်မာနိုင်ငံအိမ်ခြံမြေဈေးအား အပြောင်းအလဲဖြစ်သင့်နေပြီဖြစ်သည်။
အာဆီယံစီးပွားရေးအသိုက်အ၀န်း (AEC) မှာလည်း နီးကပ်လာပြီဖြစ်ပြီး အစိုးရသစ်ဖွဲ့စည်းရန်မှာလည်း မဝေးလှတော့သည့်အတွက် ၂၀၁၆ခုနှစ်အစမှာ အလွန်မြင့်တက်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံအိမ်ခြံမြေဈေးနှူန်းကိုထိန်းချူပ်ရန်မှာ အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာ့အွန်လိုင်းအိမ်ခြံမြေ၀န်ဆောင်မှူ ၀က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည့် House.com.mm မှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အိမ်ခြံမြေဈေးနှူန်းမြင့်မားရသည့် အကြောင်းအရင်းများနှင့် မည်ကဲ့သို့ထိန်းချူပ်နိုင်မည်ကို အကြံပေးဖော်ပြလိုက်ရသည်။
ငွေကြေးဖောင်းကြွမှူ နှင့် ၀ယ်လိုအား
ယခုနှစ်များတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ငွေကြေးဖောင်းပွမှူများဆက်တိုက်မြင့်တက်လျှက်ရှိခဲ့သည်။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှူများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ကျပ်ငွေဈေးကျဆင်းမှူများကို ထိန်းချူပ်ထားနိုင်ရန်အတွက် ပြည်သူအများစုမှာ အခြားသောရင်းနှီးမြုပ်နှံမှူများထက် အိမ်၊ခြံ၊မြေများတွင် အလုံးအရင်းဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြသည်။ ယင်းကဲ့သို့ ၀ယ်လိုအားများမြင့်တက်လာရခြင်းကြောင့် ဈေးနှူန်းများမြင့်တက်ခဲ့ကြသည်။
ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်မူ ၀ယ်လိုအားများယခင်ကထက်အနည်းငယ်ကျဆင်းသွားသော်လည်း အိမ်၊ခြံ၊မြေ၀ယ်ဈေးများမှာကျဆင်းခြင်းမရှိသေးဘဲ ရှိနေသည်။ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများ၏ ခန့်မှန်းချက်များအရလဲ ၀ယ်လိုအားအပြောင်းအလဲမရှိဘဲ ယခုအတိုင်းဆက်လက်သွားနေမည်ဆိုပါက ဆက်လက်မြင့်တက်ရန်မရှိဘဲ ဈေးငြိမ်သွားနိုင်ကြောင်းသိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပွင့်လင်းမြင်သာမှူမှာ အဓိကအရေးကြီးသည့်အနေအထားတွင်ရှိနေသည်။ အိမ်၊ခြံ၊မြေ ဈေးနှူန်းများကို ထင်သာမြင်သာအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည့် ဈေးကွက်နေရာမရှိနေခြင်းသည်လည်း ဈေးနှူန်းပြိုင်ဆိုင်မှူများမရှိခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဈေးကစားသူများအတွက် အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဖြစ်နေသည်။ သို့သော်လည်း ယခုနှစ်များတွငမူ အွန်လိုင်းပလတ်ဖောင်းများဖြစ်သည့် House.com.mm ကဲ့သို့သော အွန်လိုင်းပလတ်ဖောင်းများတိုးပွားလာခြင်းမှာ ဈေးကွက်ကိုထင်သာမြင်သာရှိစေပြီး အိမ်ရှာဖွေသူများ နှင့် အိမ်ရောင်းလိုသူများ အတွက် ဈေးနှူန်းများကအစ မြင်နိုင်နေသည့်အတွက် ဈေးကွက်၏ အခြေခံဈေးများကို အလွယ်တကူသိရှိနိုင်ပြီး ဈေးကစားခြင်းများအား သက်သာစေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဈေးနှူန်းပြိုင်ဆိုင်မှူများလည်း ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပြီး ယင်းအပြိုင်အဆိုင်များကြောင့်ပင် ဈေးနှူန်းအထိန်းအကွပ်များရှိလာနိုင်မည်။ ပိုမိုသာလွန်သောဈေးနှူန်းအားရရှိလိုပါက ရရှိလိုသောဈေးနှူန်းများကို ပြောနေမည့်အစား ပိုမိုကောင်းမွန်သော အိမ်အဖြစ်ပြုပြင်ဖန်တီးခြင်း အစရှိသည့် အရည်သွေးကောင်းများလဲ ထွက်ပေါ်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဈေးကွက်ပွင့်လင်းမြင်သာမှူနှင့်ပတ်သက်၍ House.com.mm ၏ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဖြစ်သူ Mr.Balaji Ramaswami မှ “ အစိုးရသစ်လဲတက်လာတော့မယ်၊ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းတွေကိုလဲ အွန်လိုင်းအနေနဲ့ ပိုမိုလုပ်ကိုင်လာတာတွေရှိလာတာကြောင့် ဈေးကွက်ကတော့ အရင်ထက်စာရင်ပိုပြီးပွင့်လင်းလာတာကိုတော့ တွေ့ရပါတယ်။ နောက်နှစ်မှာဆိုရင် အိမ်ခြံမြေကို အွန်လိုင်းကနေရှာဖွေမှူနှူန်းဟာ ၃၀၀ ရာခိုင်နှူန်းပိုမိုများပြားလာလိမ့်မယ်လို့လဲ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
အိမ်၊ခြံ၊မြေ ဈေးကွက်ဟာလဲ တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပြီ။ ပြီးတော့ ကန့်သတ်ချက်တွေ၊ဥပဒေတွေကို ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားတွေနဲ့ ပြောင်းလဲနိုင်တာတွေကိုမြင်နေရတာတွေကြောင့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်ကို နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှူတွေဟာ တော်တော်စိတ်ဝင်စားလာကြတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။ ဒီိ့အတွက်ကြောင့်လဲ ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး ဈေးနှူန်းယှဉ်ပြိုင်မှူတွေကြောင့် နိုင်ငံရဲ့ အိမ်ခြံမြေဈေးတွေငြိမ်လာမယ်လို့လဲ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ မဝေးတော့မဲ့ အနာဂတ်တစ်ခုမှာ မြန်မာနိုင်ငံအိမ်ခြံမြေဈေးကွက်မှ ဈေးနှူန်းသင့်တင့်တဲ့ အိမ်ခြံမြေတွေနဲ့ အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ ဇိမ်ခံအဆောက်အဦးများလည်း ထွက်ပေါ်လာမယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ကတော့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ” ဟု ပြောကြားသည်။
Launched in 2012, House.com.mm isaRocket Internet venture and an affiliate of Motors.com.mm, Work.com.mm, Shop.com.mm, Kaymu.com.mm and Ads.com.mm. Whether people are looking for properties for rent or for sale, the internet platform House.com.mm enables customers to easily find or sell their house, apartment, commercial property or land online. At the same time, property providers and agents getatrusted online presence throughapersonalized webpage.
Visit House.com.mm on Facebook and LinkedIn.